InsideSales: Mifampiresaka, Gamify, Maminany ary alao sary an-tsaina ny varotra
Mifandraisa, Gamify, Maminany ary alao sary an-tsaina ny varotra
Alakamisy Oktobra Oktobra 31, 2013 Alatsinainy Oktobra 18, 2021 Douglas Karr
InsideSales.com's PowerSuite ™ dia sehatra fitantanana fitarihana valiny izay manome ny ekipa mpivarotra ny zavatra rehetra ilain'izy ireo hanatsarana ny fizotry ny fivarotana lavitra ary hametrahana ny varotra ho be loatra. Ny vokatra lozisialy InsideSales.com dia natao hamaly ny fitarihana sy ny fangatahana haingana sy haingana. Izany dia ahafahan'ny mpanjifa mampiakatra be ny tahan'ny fifandraisana sy ny mari-pahaizana ary handroaka ny varotra.
Vokatra ho an'ny Salesforce CRM
PowerDialer ™ ho an'ny Salesforce - Ny dialer mahery indrindra eo amin'ny tsena namboarina manokana hihazakazahana ao amin'ny Salesforce CRM. Mitaky ny Salesforce CRM.
Kitiho-to-Call ™ ho an'ny Salesforce - Click-To-Call ™ ho an'ny Salesforce dia mitondra ny fikarohana farany sy ny haitao an'ny sehatra InsideSales.com mankany amin'ny Salesforce CRM.
LocalPresence ™ ho an'ny Salesforce - Ny tambajotra nasionaly tokana natao ho an'ny ekipa mpivarotra sy marketing hivarotra sy hivarotra an-toerana an-toerana amin'ny alàlan'ny telefaona, tranonkala ary mailaka.
PowerStandings ™ ho an'ny Salesforce - PowerStandings ™ dia mitondra singa gamification manaitra amin'ny PowerDialer ™ ho an'ny Salesforce, ary manatsara be ny fahombiazan'ny rep.
PowerText ™ ho an'ny Salesforce - PowerText ™ dia manome fampahatsiahivana fampandrenesana, fandefasana hafatra iray, fanarahan-dia ary fitaterana amin'ny fifandraisana an-telefaona rehetra ao anatin'ny SaaS CRM, salesforce.com.
Vokatra ho an'ny InsideSales.com
Sehatra fitantanana fitarihana - Sehatra fitantanana fitarihana fitakiana an-fangatahana misy ny fitaovana valiny fitarihana rehetra ilainao hifandraisana, hahafeno fepetra ary hikatona ny varotra bebe kokoa.
PowerDialer ™ - Ny dialer mahery indrindra eny an-tsena. Natao ho an'ny varotra B2B sy B2C sarotra. Ny PowerDialer ™ dia tsy manatsara ny fotoana fiantsoana fotsiny, fa manatsara ny valiny.
PowerInbound ™ - Ireo fitaovana telephony PowerInbound ™ rehetra ho an'ny ivon-toerana fiantsoana miditra. Miharo amin'ny PowerDialer ™ ho an'ny fampifangaroana antso anaty / ivelany.
LocalPresence ™ avy amin'ny InsideSales.com - Mifangaro tanteraka amin'ny PowerDialer ™, LocalPresence ™ dia manome orinasa orinasa eo an-toerana amin'ny tsena 280 mahery any Etazonia.
Loop amin'ny valiny miaraka amin'i ELF ™ - Ny rafitra Response Loop dia mampiasa "Electronic Labor Force ™" namboarina ho an'ny fitaizana fitarihana manan-tsaina sy fitantanana ny workflow. Mandefa mailaka, fax, avereno zotra, manetsika antso an-telefaona, sy ny maro hafa.
Fandraisana an-tsoratra sy fanaraha-maso - Raketo ary / na araho ny antso rehetra. Tsara ho an'ny repoblika fiofanana ary hahazoana antoka ara-kalitao.
JabberDog ™ - Dialer mandeha ho azy handefasana hafatra am-peo miaraka amina safidy handefasana mailaka na lalana mankany amin'ny agents mivantana.
Tags: dialerao anaty varotrainsidesales.commitarika fikarakaranafanehoana toeranampandefa herinaratrapowerdialerfanaraha-maso ny varotrafandraketana ny varotravalin'ny varotrasalesforcesalesforce crmfitantanana ny workflow
Paikady ecommerce 20 hampitomboana ny varotra fialantsasatra